Mgbaàmà COVID-19 ogologo oge maka ndị nwere ọrịa Rheumatic
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Mgbaàmà COVID-19 ogologo oge maka ndị nwere ọrịa Rheumatic
Ọmụmụ ihe ọhụrụ nke ndị nyocha na Hospitallọ Ọgwụ maka ịwa ahụ pụrụ iche (HSS) dị na New York City gosipụtara ihe karịrị ọkara nke ndị ọrịa nwere ọrịa rheumatic bụ ndị butere COVID-19 n'oge ọrịa ahụ wee mechaa nyocha COVID-19, nwere ahụmahụ a na-akpọ "ogologo oge" COVID, ma ọ bụ ihe mgbaàmà ogologo oge nke ọrịa ahụ, gụnyere mfu nke uto ma ọ bụ isi, ahụ mgbu na ike itinye uche, otu ọnwa ma ọ bụ karịa.
Nchọpụta achọpụtara ogologo oge COVID dị elu maka ndị na-ese anwụrụ, ndị ọrịa nwere nsogbu dịka ụkwara ume ọkụ ma ọ bụ ọrịa ngụgụ, kansa, ọrịa akụrụ na-adịghị ala ala, ọrịa shuga, nkụchi obi ma ọ bụ infarction myocardial, na ndị na-ewere corticosteroids.
"Ịmara mmetụta nke nsogbu a dị oke egwu," ka Medha Barbhaiya, MD, MPH, onye ọkà mmụta ọgwụ na-ahụ maka ọrịa rheumatologist kwuru na HSS bụ onye na-eduzi ọmụmụ ihe ahụ. "Maka ndị ọrịa rheumatology, ogologo oge COVID nwere ike bụrụ ihe ịma aka n'ihi na ndị ọrịa a enweelarị nnukwu nsogbu ahụike na-adịghị ala ala ma na-enye ohere nyocha ọzọ."
Dr. Barbhaiya na ndị ọrụ ibe ya gosipụtara ọmụmụ ha, "Ihe ize ndụ maka 'Long Haul' COVID-19 na Rheumatology Outpatients na New York City," na American College of Rheumatology (ACR) nzukọ kwa afọ.
Maka ọmụmụ ihe ahụ, ndị otu Dr. Barbhaiya zigaara ndị nwoke na ụmụ nwanyị 7,505 dị afọ 18 na ndị okenye nyocha nyocha na HSS maka mkpesa rheumatologic n'etiti 2018 na 2020. A jụrụ ndị sonyere ma ha enwetala nnwale dị mma maka COVID-19 ma ọ bụ ọ bụrụ Onye na-ahụ maka ahụike gwara ha na ha butere ọrịa ahụ.
Ndị ọrụ nyocha ahụ kọwara ọrịa ogologo oge COVID-19 dị ka ndị nwere mgbaàmà na-adị otu ọnwa ma ọ bụ karịa, ebe a na-ahụta obere oge dị ka ndị nwere mgbaàmà na-erughị otu ọnwa.
N'ime mmadụ 2,572 mezuru nyocha ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 56% nke ndị ọrịa kọrọ na ha butere COVID-19 kwuru na mgbaàmà ha were opekata mpe otu ọnwa. Naanị ndị ọrịa abụọ nọ n'ọmụmụ ihe ahụ nwere nchoputa gara aga nke fibromyalgia - ọnọdụ nke ike ọgwụgwụ, ahụ mgbu na mgbaàmà ndị ọzọ jikọtara ya na ogologo oge COVID - na-atụ aro na nchikota n'etiti nsogbu abụọ a pere mpe.
"Nchọpụta anyị adịghị egosi na a na-akọwahie ihe mgbaàmà nke fibromyalgia ka ogologo oge na-ebute COVID na ndị ọrịa nwere ọrịa rheumatic, nke bụ ihe a zụlitere dị ka ihe ga-ekwe omume," Lisa A. Mandl, MD, MPH, onye na-ahụ maka ọrịa rheumatologist na HSS na kwuru. agadi ode akwụkwọ nke ọhụrụ ọmụmụ.
Ndị nyocha HSS na-eme atụmatụ iji data ahụ dị ka akụkụ nke nyocha ogologo oge nke ndị ọrịa rheumatology nwere ogologo ogologo COVID iji chọpụta ma ọ bụrụ na mgbaàmà na-adịgide adịgide nke ọrịa ahụ na-egbochi ọnọdụ rheumatologic ha. Onyunyo na-aga n'ihu nke ndị ọrịa a ga-enye nghọta dị mkpa na mmetụta ogologo oge nke COVID-19 na ndị ọrịa nwere ọrịa rheumatic.